Al-Shabaab oo sheegatay dilka 14 askari oo ka tirsan ciidanka KDF | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo sheegatay dilka 14 askari oo ka tirsan ciidanka KDF
Kooxda Al-Shabaab, ayaa sheegatay in ay dileen ku dhawaad 15 askari oo ka tirsan Ciidamada Kenya, halka KDF, ayaa sheegtay in kooxda ku jirta Hawlgalka Amani Boni uu ka dhaawacmay hal askari.
MOGDISHO, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay inay dishay 14 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Kenya, kedib Qarax ka dhacay gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu Talaadadii.
Sida Al-Shabaab, ku baahiyeen barahooda bulshada, qaraxan ayaa dhacay, kadib markii miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago ay haleeshay gaari ay leeyihiin ciidamada KDF ee ku safrayay inta u dhaxeysa deegaanada Milimani iyo Baure ee Gobalka Lamu oo u dhow xadka Soomaaliya.
Baure iyo Milimani waxay ku yaallaan, Kaymaha Boni ee cufan, halkaas oo Kenya ay bishii Sebtember 2015 ka bilowday Hawlgallo amni oo ujeekoodu yahay in looga hor tago Kooxda Al-Shabaab.
Ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-shabaab, hayeeshee, Kenya ayaa sheegtay, in hal askari oo ka tirsan KDF uu si xun u dhaawacmay kaas oo hadda lagu difaacayo Isbitaalka Ciidamada Difaaca ee Nairobi.
Kenya ayaa la kulantay weerarro dhimasho iyo dhaawacba leh oo kaga yimid Al-shabaab tan iyo markii ay ciidamadeeda u soo dirtay Soomaaliya sannadkii 2011 si ay ula dagaallamaan Al-Shabaab.
Kooxda xiriirka la eh ee Al-Qaacida ee Al-Shabaab, ayaa weerarro waaweyn ka geysatay Kenya, oo ay ka mid yihiin duullaankii xarunta dukaamaysiga Westgate, hoteelka DusitD2, iyo Jaamacadda Gaarisa.